Faayidaaleen adda addaa qondaaltota mootummaa duraaniitiif bahu daraan olaanaa ta’uun eerame - ዜና ከምንጩ
Faayidaaleen adda addaa qondaaltota mootummaa duraaniitiif bahu daraan olaanaa ta’uun eerame
Qondaala mootummaa duraanii tokkoof birrii kuma 100 fi kuma 20n teessoon siinii bunaa(rakabootiin) bitameera.
Waajjira ministira muummee jalatti kan bulu waajjirri eegsisa faayidaalee abbootii taayitaa uummataa fi mootummaa aangoo irraa kaafamanii gaaffii dhiyeessuun bittaan karaa ministeera maallaqaatiin raawwatamu daraan olaanaa fi fudhatama kan hinqabne ta’uun eerameera.
Bittaawwan raawwatamanu meeshaalee manaa kan akka soofaa, siree, minjaala, teessoo tv, golgaa keenyana manaa, kuusaa bishaanii, uffataa fi teessoo siinii bunaa dabalata.meeshaalee manaatiin dabalatatti uffannaan teessoo konkolaataa fi konkolaattota maqaa abbaa taayitichaatiin jiraniif waggaa waggaatti gommaan afur akka bitamu beekuun danda’ameera.
Gatiin isaaniis barsiifataan kan meeshaalee kanaaf gatii bittaa idileetiif bahu caalaatti daraan olaanaa fi fudhatama kan hinqabne ta’uu hojjetaan waajjirichaa Addis Maaledaatti ibsaniiru. Itti dabaluunis; haala gaaga’ama dinagdee Itoophiyaan keessa jirtuun; akkasumas wayita waraanaatti baasiin kana fakkaatu kan itti gaafatamummaa dhabe ta’uu isaa dubbataniiru.
Qondaaltonni kunneen bulchiinsa darbe irraa hanga ministira muummee ammaatti gorsummaa fi caasaalee adda addaatti kan tajaajilan ta’uun ni beekama.
Qondaaltota duraanii keessaa ministirri muummee duraanii obbo Hayile Maariyam Dassaalenyii fi haati warraa Mallas Zeenaawii, Azeeb Masfiin keessatti argamu.
Miseensi waajjirichaa Addis Admaasitti akka ibsanitti, Azeeb Masfiiniif addatti mana jireenyaa isaanii naannoo Atilaasitti argamuuf birrii kuma 100 fi kuma 20n teessoon siinii bunaa (rakabootiin) tokko akka bitameef ibsanii; kan biraas kan akka golgaa keenyana manaa baasii olaanaa saanduqa mootummaa keessaa baheen akka bitame dubbataniiru.
Ministirri muumme Abiyyi Ahimad wayita gara aangootti dhufan baasii saanduqa mootummaa keessaa bahu; keessumattuu sababa wallaansaa fi hojiidhaaf jedhamee sharafa alaa bahaa ture hambisuudhaaf hojiin jalqabamee akka turee fi abbaa taayitaa tokkoof dhukkubsachiiftota 15 dabalatee; gaaffiin sharafa alaa akka isaan mudate dhaabbilee sab-quunnamtiitti ibsuun isaanii kan yaadatamuu dha.
Haala walqabateen akka madda Addis Maaledaatti; ministira muummee duraanii Hayile Maariyam Dassaalenyiif filannoo isaaniitiin birrii kuma 68n kopheen gogaa naachaa irraa hojjetame bitamuufii dubbatanii; yeroo adda addaatti maallaqni kuma kudhaniin lakkaa’amu uffannaa pirotokooliitiif baasii akka ta’u dubbataniiru.
Kan biraa; qondaaltonni akka ministira barnootaa duraanii Tafarraa Waalwaa, akkasumas kan akka Addisuu Laggasaa maallaqa saanduqa mootummaatii bahuuf of eeggannoo akka taasisanu ibsaniiru.
Ogeessi dinagdee maqaan isaanii akka dhahamnu hinbarbaanne akka ibsanitti; biyya hiyyeettii hanqina sharafa alaa qabdutti gochaa gaddisiisaa akkasii raawwachuun; keessumattuu rakkoowwan adda addaa kan akka vaayireesii Koroonaa fi waraanaan biyya dinagdeen ishee quucaretti baasiin hanga hinqabne barbaachisaa miti jechuudhaan Addis Maaledaatti ibsaniiru.
Gorsaan seeraa maqaan isaanii akka eeramu hinbarbaadin Addis Maaledaatti akka ibsanitti; barsiifataan waajjira ministira muummee jedhamee itti fayyadamna malee labsiin isaa seeraan kan ragga’e akka hintaane himan. Waajjirri faayidaalee kabachiisus seera qabeessummaan isaa fi labsiidhaan ragga’uun isaa shakkisiisaa dha jedhaniiru. Itti dabaluunis; bara 2009tti miseensota mana maree bakka bu’oota uummataaf, muudamtootaa fi abbootii seeraatiif, akkasumas qondaaltota soorama bahanuuf mirga faayidaalee, jechuunis kan manaa, kan konkolaataa fi kan kana fakkaatan akka kabajamuuf ogeessichi Addis Maaledaatti ibsaniiru.
Total views : 7536919